Mareykanka oo Soojeediyey in Kooxda Alshabaab lala galo – Kismaayo24 News Agency
Mareykanka oo Soojeediyey in Kooxda Alshabaab lala galo
by admin 31st May 2019 062
Saraakiil ka tirsan Taliska Ciiddanka Maraykanka ee ugu qaabilsan Hawlgalka Qaaradda Afrika ee AFRICOM waxay sheegeen in Hadafka Maraykanka ee Somalia tahay siii loo wiiqi lahaa Awoodda Milliteri ee Alshabaab, si loo gaaro Xal ama Go’aan Siyaasadeed.
Taliye-ku-xigeenka AFRICOM ee djinaca Rayidka, Ambassador Aleskandar M. Laskaris oo shalaay Suxufiyiinta kula hadlay Xarumaha Dhexe ee Taliska AFRICOM ee magaalladda Stuttgart ee dalka Jarmalka waxa uu sheegay in nooca Hawlaha Mukhaawamada ama Iska-caabinta ka socota Soomaaliya lagu dhamayn karo Cadaadis Milliteri iyo Is-faham Siyaasadeed, waa sida uu hadalka u dhigay.
“Waxba igama khuseeya sida loo samaynayo” ayuu yiri AmbassadorAleskandar M. Laskaris.
Waxa uu intaasi ku daray in kooxaha Soomaalida ee dagaalamaya gaaraan Xal Siyaasadeed, loona baahan yahay in lagu saleeyo Dhaqanka Soomaalida.
Sidoo kale, Agaasimaha Sirdoonka ee AFRICOM, Admiral Heydi Berg oo ka hadashay Shirka Jaraa’id waxay sheegtay inay Alshabaab weli leeyihiin awoodo ay ku weeraraan Danaha Reer Galbeedka iyo Saaxiibadooda ku leeyihiin gudaha Somalia iyo dalalka Bariga Afrika.
SAWIRO: Raisul Wasaare Khayre oo kutagey kormeer booqasho Sooxiritaan ah.
Update: Alshabaab oo Weerar aan la fileyn kusoo qaaday Dagmada Afgooye iyo wixii ka dhacay oo dhagaha Faraha la gashtay
Tifaftiraha K24 23rd January 2017
Daawo: Magaalada Caabud-waaq oo Caruur iyo ciroole aan loo kala harin dabaal daga madaxweyne farmaajo
Ciidamadda Dowladda oo dad ku xasuuqey Masjid ku yaala………